Farmaajo oo shir Nairobi ka dhacaya ka qeybgalaya - Somali
Farmaajo oo shir Nairobi ka dhacaya ka qeybgalaya
ONLF oo maanta dooraneyso guddoomiye cusub
Galleyda Kenya oo laga helay "Sun halis ah"
Museveni iyo dhiggiisa DRC oo ku heshiiyay xoojinta ganacsiga labada dal
Posted at 13:45 11 Nofembar 201913:45 11 Nofembar 2019
Dibadbaxyada Hong Kong: Muuqaalka askeri si toos ah qof u toogtay
Video caption: Hong Kong protester's shooting by policeman livestreamed on FacebookHong Kong protester's shooting by policeman livestreamed on Facebook
Askeri ayaa toogtay qof dibadbaxe ahaa oo ka qeybgalayay isu soo baxyada ka taagan Hong Kong. Askeriga wuxuu soo bixiyay baskoolad ka dibna wuxuu soo jiiday qof ka mid ah dadkii isu soo baxay oo ku sugna meel jid-gooyo ay tiillay.
Nin kale oo isku deyay inuu askerigaa u dhowaado oo wejiga u duubna, ayuu ku riday xabad kaga dhacday lugta.
Dhacdo kale, nin tageersanaa mamulka beijing ayaa la gubay ka dib markii uu la murmay dadkii dibadbaxayay ee careysnaa.
Wuxuu ku jiraa xaalad halis ah, waxaana weli lagu daweynayaa cisbitaalka.
Sidoo kale waxaa maanta jiray isku dhacyo kale oo badan oo dhexmaray booliska iyo dadka dibadbaxaya oo weli Hong Kong ka taagan.
Faahfaahinta halkan si toos ah uga akhri:
Posted at 12:32 11 Nofembar 201912:32 11 Nofembar 2019
Turkiga oo dib ugu celinaya dalalkooda maxaabista ururka IS
Turkiga wuxuu bilaabay qorshe uu dib ugu celinayo dalalkii ay kasoo jeedeen dadka looga shakisan yahay inay ka tirsanaayeen kooxda la magac baxday Dowladda Islaamka ee lagu hayo dalkaas.
Wasiirka arrimaha gudaha xukuumadda Turkiga wuxuu sheegay in nin kamid ah kooxda jihaad doonka loo tarxiilay Mareykanka halka Khamiista nagu soo aadan 7 dagaalamayaal ah oo u dhashay Jarmalka loo tarxiili doono dalkooda.
Turkiga wuxuu ku howlan yahay inuu dalalkooda u tarxiilayo labo qof oo lagu tuhunsan yahay inay katirsanaayeen ururka IS oo u dhashay Ireland iyo 11 Faransiis ah.
Balse ma jiro wax war ah oo kasoo baxay dowladaha uu Turkiga u tarxiilayo raggan.
ilo wareedyo ku sugan Faransiiska ayaa sheegaya in Turkiga uu maleeshiyaadka ka tirsan kooxda isku magacaawday Dowladda Islaamka uu marar badan dib ugu celinayay Faransiiska kaddib heshiis dhexmaray sannadkii 2014-kii labada dal.
Turkiga ayaa marar badan dhaleeceen u jeediyay dalalka reer galbeedka oo ay ku eedeyay in aysan dan ka laheyn la wareegidda maxaabiista looga shakisan yahay inay ka tirsanaayeen ururka IS ee ku xiran dalkaas.
Posted at 11:35 11 Nofembar 201911:35 11 Nofembar 2019
Madaxweynaha Dowladda Federaalka ee Soomaaliya, Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa lagu wadaa inuu gaaro magaalada Nairobi si uu ugu qeybgalo shirka dadweynaha iyo horumarka oo ay soo qaban qaabisay Qaramada Midoobey, sida laga soo xigtay xafiiska madaxtooyda.
“Dowladda Federaalka Soomaaliya waxa ay mudnaan gaar ah siinaysaa madal kasta oo looga arrinsanayo horumarka iyo iskaashiga, maadaama dalkeennu uu u baahan yahay maalgashi iyo garab istaag", ayuu yiri Afhayeenka madaxweynaha, Cabdinuur Maxamed Axmed.
Wuxuu intaa ku daray: "Shirkaan waxaa si gaar ah diiradda loogu saarayaaarrimaha awood-siinta haweenka iyo kaalinta dhallinyarada ee hoggaamminta iyo horumarka si loo gaaro Hadafyada Horumarka ee Joogtada ah kuwaas oo ahmiyad weyn u leh dalkeenna."
Shirkan oo uu garwadeen ka yahay Sanduuqa Qaramada Midoobey ee Horumarinta Dadka (UNFPA) ayaa ah mid sannadle ah, waxaana looga hadlaa qorsheyaasha dhinacyada horumarka iyo xasiloonida.
Posted at 10:53 11 Nofembar 201910:53 11 Nofembar 2019
State House, UgandaCopyright: State House, Uganda
Madaxweynaha Uganda, Yoweri Museveni iyo dhiggiisa Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo Felix Tshisekedi ayaa ku heshiiyay inay xoojin doonaan xiriirka ganacsi ee ka dhexeeyo labada dal.
Madaxweyne Felix Tshisekedi oo muddo saddex maalmood ah booqasho ku joogo Uganda ayaa ka qeybgalaya kulankii ugu horreeyay ee ganacsi ee ka dhexeeyo labada waddan, wuxuu sheegay in Museveni uu kala shaqeyn doono xoojinta danaha qaaradda marka ay timaaddo isdhexgalka dhanka ganacsiga.
Labada hogaamiye oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada Kampala ayaa shaaca ka qaaday qorsheyaal ay ku doonayaan inay ku dhisaan waddo isku xirto labada dal si badeecadaha la isaga gudbiyo.
Posted at 9:06 11 Nofembar 20199:06 11 Nofembar 2019
Baaritaan uu sameeyay mid kamid ah telefishinada maxalliga ee dalka Kenya ayaa lagu ogaaday in Galleyda lagu iibiyo suuqyada dalkaas laga helay maaddo sun ah oo la sheegay inay gaartay heerkii ugu sarreeyay, waxay arrintani caro ka dhalisay gudaha dalkaas.
Baaritaanka uu sameeyay telefishinka NTV, wuxuu tijaabiyay ilaa noocyo kala duwan oo isugu jiro Galleyda iyo Burka ay soo saaraan ilaa 12 shirkadood.
Galleyda ay soo saaraan saddex kamid ah shirkadahaas, waxaa laga helay maaddo sun ah oo la yiraahdo 'aflatoxin' taas oo gaartay heerkii ugu sarreeyay.
Maaddada Aflatoxin,waxay si dabiici ah uga dhalataa Galleyda taas oo sababi karta cudurka Kansarka.
Waaxda la socota tayada badeecadaha ee Kenya ayaa hakisay howsha shan shirkadood oo saaro Galleyda dalkaas kaddib markii ay ku aragtay inay saameysay maaddadan sunta ah isla markaasna shacabka dalkaas ugu baaqday inay aysan isticmaalin cuntadaas.
Dhaqaatiirta iyo khuburadda dhanka cuntada oo uu wareystay telefishinka ayaa sheegay in dadka qaar ay dhinteen markii lagu tuhmay inay cuneen Soor sumeysan.
Dhaqaatiirta waxay la xiriiriyeen cudurka Kansarka inuu ka dhasho maddada sunta ah ee laga helay Galleyda laga soo saaro gobolka Rift Valley ee dalka Kenya.
Wasiirka beeraha ee dalka Kenya, Mwangi Kiunjuri oo uu wareystay telefishinka ayaa xaqiijiyay in Galleyda laga helay maddada sunta ah ee aflatoxin.
Wuxuu ka digay in xoolaha cunno Galleydan sumeysan ay dadka usii gudbin karaan marka ay isticmaalaan canahooda iyo hilibkooda.
Posted at 8:11 11 Nofembar 20198:11 11 Nofembar 2019
Xubnaha sare ee ururka ONLFImage caption: Xubnaha sare ee ururka ONLF
Ururka ONLF ayaa maanta la filaya in guddoomiye cusub ay ku doortaan magaalada Godey ee Dowlad Deegaanka Soomaalida ee dalka Itoobiya xilli maalmihii lasoo dhaafay uu shirweyne uga socday halkaas.
Ururka ayaa ku heshiiyay in xubnaha golaha dhexe laga dhigo ilaa 115 xubnood, waxaana lagu wadaa in maanta ay ansixiyaan xubnahaas isla markaasna ay ka dhex doortaan guddiga fullinta ee ururka ONLF , kaddibna ay kasii dhex doortaan guddoomiyaha cusub ee ururka, sida uu kusoo warramaya weriyaha BBC, Cabdinaasir Sheekh Maxamed Xikam.
Waxaana xilka guddoomiyaha u tartamaya Cabdiraxmaan Maadey iyo Axmed Yaasin.
Ururka ONLF wuxuu muddo dheer ku jiray halgan uu ku doonayay in ku xoreeyo deegaanada Soomaalida Itoobiya balse waxay heshiiyeen dowladda markii laga saaray 'liiska argagixisada' kaddib isbaddalladii ka dhacay dalkaas.
Ururka ONLF oo isu beddelay xisbi siyaasadeed ayaa qorsheynaya in uu ka qeybgalo doorashada soocota ee deegaanka Soomaalida ka dhici doonta sannadka soo socda.
Posted at 13:13 8 Nofembar 201913:13 8 Nofembar 2019
'Cabsi laga qabo inuu Ayax ku faafo dalal ku yaal Bariga Afrika'
Ayaxa waxaa uu baabi'iyay dhulqaasimeedka gobollo badanImage caption: Ayaxa waxaa uu baabi'iyay dhulqaasimeedka gobollo badan
Qaramada Midoobey waxay sheegtay in Ayaxa ku habsaday deegaano badan oo ka tirsan dalka Itoobiya uu si ku baahi karo dalal deriska waa haddii la xakameyn waayo.
Dowladda Itoobiya ayaa ku baaqday in si deg deg wax looga qabto Ayaxa saameynta ku reebay ilaa 9 gobol oo ka tirsan dalkaas, sida ay sheegtay Qaramada Midoobey.
Haddii la xakameyn waayo Ayaxa waxaa uu kusii faafi karaa deegaanada sida gobolka waqooy bari ee Kenya, qeybo kamid ah Eritrea, iyo koonfurta Suudaan, sida ay sheegtay ha'yadda FAO.
Ayaxa ayaa sidoo kale ku reebay dhuldaaqsimeedka gobolka Soomaalida ee dalka Itoobiya.
Gobolka Amxaarada, wuxuu Ayaxa baabi'iyay beero ku yaal halkaas.
Waxaa lagu guuldareystay dadaallada looga hortaggayo AyaxaImage caption: Waxaa lagu guuldareystay dadaallada looga hortaggayo Ayaxa
Dadaallada lagu xakameynayo Ayaxa ayaanan weli si rasmi ah uga dhaqan gelin dhulka uu saameeyay.
"Waxaan dooneynaa in aan si deg deg ah agab ugu daabulno deegaannada , taas oo kamid ah tallaabooyinka lagu xakameynayo Ayaxa" ayay tiri Faadumo Seyd oo ah wakiilka laanta Qaramada Midoobey u qaabisan cuntada ee FAO ee dalkaas.
Toddobaadkii lasoo dhaafay, dowladda Itoobiya waxay diyaarado buufinayay Ayaxa u dirtay deegaanada qaar.
Ha'yadda FAO waxay sheegtay in Ayaxa uu maalinkiiba uu baabi'in karo 1.8 Malyan oo dalag ah isla markaasna uu ku faafi karo dhul gaarayo 350 Kiiloomitar oo isku wareeg ah.
Ayaxan ayaa waxaa la rumeysan yahay inuu kasoo duulo dhinaca dalka Yemen saddex bilood ka hor.
Posted at 12:08 8 Nofembar 201912:08 8 Nofembar 2019
Ciidammada Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo oo weerar ku dilay tiro maleeshiyaad ah
Militariga dalka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo waxay sheegeen inay dileen ugu yaraan 25 kamid ah jabhado ka dagaallamo dalkaas.
Wararka waxay sidoo kale sheegayaan in 7 kamid ah ciidammada dowladda lagu dilay dagaal ka dhacay magaalada Beni ee gobolka North Kivu, waqooy bari dalkaas.
Ciidammada Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo ayaa weerar ku qaaday bariga dalka si halkaas uga saaraan maleeshiyaadka hubeysan.
Posted at 11:51 8 Nofembar 201911:51 8 Nofembar 2019
'Trump oo xarigga ka jari doono' biyo xireenka muranka badan dhaliyay ee laga dhisayo webiga Nile
Biyo xireenka weyn ee Itoobiya ka dhiseyso webiga Nile waxaa la filaya in la howgaliyo sannadka 2022Image caption: Biyo xireenka weyn ee Itoobiya ka dhiseyso webiga Nile waxaa la filaya in la howgaliyo sannadka 2022
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa wasiirada arrimaha dibadda dalalka Itoobiya, Masar iyo Suudaan wuxuu u sheegay inuu xarigga ka jari doono biyo xireenka ay Itoobiya ka dhiseyso webiga Nile marka la dhameystiro, sida uu sheegay wasiirka biyaha Itoobiya.
Sileshi Bekele oo ah wasiirka biyaha iyo waraabka Itoobiya ayaa sheegay in madaxweynaha uu hadalkan ka dhawaajiyay xilli Mareykanka uu dhexdhexaadinayay khilaafka ka dhashay qeybsiga biyaha webiga Nile.
Wasiirada arrimaha dibadda saddexda dal waxay isku waafaqeen inay wadahadallo kale ay ku qaban rabaan Mareykanka 15-ka bisha January ee sannadka soo socda si xal kama dambeys ah loo gaaro.
Bayaan si wadajir ah uga soo baxay saddexda dalka oo ay soo saartay waaxda maaliyadda Mareykanka ma aysan sheegin qorshaha Trump uu xarigga ka jari doono biyo xireenka.
Biyo xireeenka ay Itoobiya ka dhiseyso halkaas, waxaa ku kacaya 4 bilyan oo doolar, waxaana la filaya in la dhameystiro sannadka nagu soo aadan.
Masar waxay ka walaacsan tahay in mashruuca uu fursad u siin doono Itoobiya inay maamusho biyaha webiga Nile.
Posted at 9:29 8 Nofembar 20199:29 8 Nofembar 2019
Shaqaalo u shaqeyn jiray Twitter oo lagu eedeeyay inay basaasiin u ahaayeen Sucuudiga
Labo qof oo horey ugu shaqeyn jiray shirkadda Twitter oo ku sugan dalka Mareykanka ayaa lagu soo oogay dacwad ah inay u basaasayeen dowladda Sucuudi Carabiya.
Maxkamad ku taal magaalada San Francisco ayaa ku eedeysay in saraakiisha Sucuudiga ay ka codsadeen in loo soo gudbiyo macluumaadka shakhsiyaadka adeegsada barta Twitter-ka gaar ahaan kuwo dhaleeceeya dowladda Sucuudiga.
Magacyada raggan ayaa lagu kala sheegay, Axmed Abouammo oo u dhashay Mareykanka , Cali Alzabarah oo kasoo jeedo Sucuudiga iyo Axmed Al Mutaari oo isna Sucuudiga u dhashay, waxaana dhammaan raggan lagu eedeeyay inay u jaajuusayeen Sucuudiga, sida ku xusan dokuumentiga kasoo baxay maxkamadda.
Warbaahinta New York Times ayaa ku warrantay in markii ugu horreysay muwaadiniin Sucuudiga u dhashay oo ku sugan Mareykanka lagu helo inay ku gudo jireen howlo basaasnimo ah.
Axmed Abouammo ayaa kasoo muuqday maxkamad ku taal Seattle Arbacadii, waxaana la filaya in kiiskiisa dib loo dhageysto Jimcaha.
Abouammo waxaa uu shaqadii ku hayay Twitter-ka oo aheyd maamulaha dhanka warbaahinta ka tegay sannadkii 2015-kii.
Cali Alzabarah oo Twitter ka ahaan jiray Injineer ayaa lagu eedeeyay inuu dhac u geystay macluumaadka in kabadan 6,000 qof oo adeegsanayay Twitter-ka sannadkii 2015-kii kaddib markii ay shaqaaleysiisteen saraakiil Sucuudi ah.
Posted at 8:30 8 Nofembar 20198:30 8 Nofembar 2019
Aaasasaha shirkadda Twitter oo booqasho ku joogo Nigeria
Jack Dorsey oo ah madaxa shirkadda Twitter ayaa booqasho ku tegay dalka Nigeria xilli ay rasmi ah ugu bilaabatay safar uu ku marayo dalal ka tirsan qaaradda.
Wuxuu Talaadadii sheegay inuu afar waddan oo Afrikaan ah booqasho ku mari isla markaasna uu la kulmi doono qaar kamid ah ganacsatada qaaradda.
Posted at 6:57 8 Nofembar 20196:57 8 Nofembar 2019
Qaramada Midoobey oo dalal shisheeye ku eedeysay jebinta cunaqabateynta hubka ee saaran Libya
Posted at 6:55 8 Nofembar 20196:55 8 Nofembar 2019
Waa Jimco taarikhda waxay ku beegan tahay 8-da bishan Nofembar 2019-ka.
Posted at 13:35 6 Nofembar 201913:35 6 Nofembar 2019
Puntland oo mamnuucday in gaadidka ay safraan xilliga habeenkii
Puntland waxay mamnuucday gaadidka ku safro xilliyada habeenkii waddooyinka kaddib fataahado saameeyay aggaasImage caption: Puntland waxay mamnuucday gaadidka ku safro xilliyada habeenkii waddooyinka kaddib fataahado saameeyay aggaas
Maamulka Puntland ayaa si kumeel gaar ah u mamnuucay baabuurta xilliga habeenkii ku safri jirtay halkaas kaddib markii roobabka mahiigaanka ay bubur u geysteen waddada weyn ee isku xirta Puntland iyo bartamaha Soomaaliya.
Taliyaha ciidammada waddooyinka ee Puntland, Axmed Cabdi Cali ayaa BBC u sheegay in si kumeel gaar ah loo hakiyay gaadiidkii xilliyada habeenkii isaga kala gooshi jiray halkaas.
"Waxaan u baajinay gaadidka in xilli kasta ay in waddada go'i karto oo gaadidka la go'i karta, waxaana halkaa ka imaan karaa khasaare nafeed iyo mid hantiyeed" ayuu yiri taliyaha ilaalada waddooyinka Puntland.
Axmed Cali waxaa uu sidoo kale sheegay in baabuurta loo fasaxi doono inay safraan xilliyada habeenkii tan iyo inta laga hubinayo amniga waddooyinka.
"Maalintii wuxuu arki karaa oo uu ka taxaddari karaa khatarta laakin habeenkii oo roobka da'a oo toggagu biyo keeni karaan, qofka ma arki karo meesha khartarta ah" ayuu yiri Axmed Cabdi.
Waxaa dalka Soomaaliya ka da'ay roobab mahiigaan ah oo iyo fatahaado horseeday in kumanaan qof ay guryahooda ka barakacaan, waxaana sidoo kale ay fatahaadaha burburiyeen waddooyinka muhiimka ah.
Posted at 13:09 6 Nofembar 201913:09 6 Nofembar 2019
Fataahadaha saameeyay Afrika bishan Oktoobar
Waxaa qaaradda Afrika ka da'ay roobab mahiigaan ah oo horseeday fataahado saameyn ku reebay shacabka.
Kumanaan kun oo qof ayaa guryahooda ka barakacay kaddib markii ay biyaha la wareegeen guryahooda.
Meelaha sida ba'an ay fataahadaha u saameeyeen waxaa kamid ah dalka Soomaaliya.
Posted at 12:13 6 Nofembar 201912:13 6 Nofembar 2019
Tiro dad ah oo ku dhimatay weerar ka dhacay dalka Tajikistan
AFP/TAJIKISTAN GOVERNMENTCopyright: AFP/TAJIKISTAN GOVERNMENT
Weerarka ka dhacay TajikistanImage caption: Weerarka ka dhacay Tajikistan
Ugu yaraan 17 qof ayaa dhimatay kaddib markii maleeshiyaad ka tirsan ururka la magac baxay Dowladda Islaamka ay weerar ku qaadeen baro kontrool oo ku taal xadka dalka Tajikistaan uu la wadaago Uzbekistan, sida ay sheegeen mas'uuliyiinta Tajikistaan.
Waxaa la sheegay in weerarka ay soo qaadeen ilaa 20 dagaalyahanno ah.
Ururka IS ma aysan xaqiijin inay qaadeen weerarka.
Booliska waxay xireen waddooyinka goobta uu weerarka ka dhacay.
Waxaa weerarka kaddib la qabtay shan ka tirsan maleeshiyaadka kaas oo ka dhacay deegaan dhaca koonfur galbeed caasimadda Tajikistaan ee Dushanbe.
Sawirro laga soo qaaday goobta oo ay baahisay wasaaradda arrimaha gudaha Tajikistan ayaa muujinaya meydad goobta daadsan oo si xun u gubtay.
Wakaaladda wararka ee dowladda ee Khovar, waxay ku warrantay in kooxihii weerarka soo qaaday ay kasoo tallaabeen dhinaca Afqanistaan.
Ururka IS ayaa hadda ka hor sheegay inay ka dambeeyeen weeraro ka dhacay Tajikistan.
Posted at 11:32 6 Nofembar 201911:32 6 Nofembar 2019
Ilhaan Cumar oo lacag ugu deeqday dadka ay fataahadaha saameeyeen ee Soomaaliya
Ilhaan Cumar oo ah xildhibaanad ka tirsan aqalka Koongareeska Mareykanka ayaa ka qeyb qaadatay munaasabad lacag loogu uruurinayay dadka ay fataahadaha saameeyeen ee ku nool magaalada Beledweyne.
Ilhaan waxay sheegtay in ay ka xun tahay khasaraaha gaaray dadkaas.
"Caawa waxaan kusoo talagalay in aan ka qeyb qaato taakuleynta...laakin waxaan maqlay ciyaalkaaga badbaadso ama haddii aad dano leedahay duco haluugu daro, haddii uu dhib ku heysto Ilaahey haka badbaadiyo...marka waxaan rabaa in ciyaalkeyga la iigu duceeyo, dhibaatooyin badan wey heystaan markaa waxaan bixinayaa ilaa shan kun oo doolar in aan ku taakuleeyo dadka walaalaheena" ayay tiri xildhibaan Ilhaan Cumar.
Ilhaan Cumar waxay horey ku baaqday in howlaha gurmadka laga qeyb qaato si loo caawiyo dadka ay fataahadaha saameeyeen ee dalka Soomaaliya.
Dhiibatada ka dhalatay daadka uu webiga Shabelle ku fatahay magaalada Beledweyne ayaa keentay in Soomaali badan oo gudaha iyo dibeddaba ku nool ay isu xilqaamaan gurmadka loo fidinayo dadka ku dhibaataysan magaaladaasi.
Posted at 9:32 6 Nofembar 20199:32 6 Nofembar 2019
Gabdho muslimiin ah oo loo diiday inay xijaab ku galaan Iskuul
Sarkaal sare oo ka tirsan Qaramada Midoobey ayaa ugu baaqday dowladda Malawi inay muujiso isku duulqaad dhanka diimaha dhexdooda ah kaddib markii labo gabdhood oo ardey ah oo muslimiin ah laga hor istaagay inay wax ka dhigtaan Iskuul ku yaal degmada Balaka oo 206 Kiilomitar oo dhinaca koonfureed kaga beegan magaalada caasimadda ah ee Lilongwe.
Gabdhahan muslimiinta ah oo xijaabna ayaa loo diiday inay galaan Iskuulkaas.
Maria Jose Torres waxay sheegtay in Malawi laga doonayo inay qaddariso dhaqanka ay leeyihiin dadka heysta diimaha kala duwan isla markaasna qaab wadahadal ah lagu xalliyo khilaafka.
Isniintii Iskuulka M’manga oo ku yaal dalka Malawi waxaa ka dhacay qalalaase u dhexeeya kooxo Kiristaan iyo Muslimiin ah, waxaana rabshadahaas ku dhaawacmay ugu yaraan 2 qof, sida uu ku warramay wargeyska Daily Times ee kasoo baxa dalkaas.
Waxaa la burburiyay dukaamo, misaajid iyo kaniisad, sida uu ku warramay wargeyska.
Kaniisadda maamusho Iskuulka M’manga ayaa gabdhaha muslimiinta ah ee xijaaban ka mamnuucday inay wax ka dhigtaan halkaas.
Torres waxay sheegtay isku dulqaadasho la'aanta diimaha dhexdooda ay 'gabdhaha ka hor istaageyso xuquuqdii aheyd inay wax bartaan'
Posted at 8:45 6 Nofembar 20198:45 6 Nofembar 2019
Cudurro halis ah oo laga digayo inay ka dhashaan fatahaadaha saameeyay Soomaaliya
Dhibatooyinka ka dhashay fatahaadahaImage caption: Dhibatooyinka ka dhashay fatahaadaha
Hay'adda Qaramada Midoobay u qaabilsan carruurta ee Unicef ayaa sheegtay in shacabka ka barakacay fataahadaha saameeyay Soomaaliya ay halis ugu jiraan cudurro halkaas ka dillaaco iyo nafaqo darro.
Unicef waxay sidoo kale sheegtay in 200,000 carruur ah oo ku nool magaalooyinka Beledweyne, Barddaale, Baydhabo, Jowhar iyo meelo kale ay dhibaatooyin ku reebeen fatahaadaha isla markaasna aysan heysan biyo nadiif ah, cunno iyo hoy.
Ha'yadda waxay sheegtay in adeegyada caafimaadka oo aan ka jirin goobaha ay qoysaska u barakaceen ay ka qeyb qaadaneyso in nafaqo darro ay ku habsato carruurta iyo in halkaas ay ka dillaacaan cudurrada ka dhasha biyaha.
"Unicef waxay mas'uuliyiinta gobolka kala shaqeyneysaa sidii loola tacaali lahaa baahida carruurta iyo qoysaska ay saameeyeen fatahaadaha"
Posted at 6:59 6 Nofembar 20196:59 6 Nofembar 2019
Mareykanka oo martigeliyay wadahadallo lagu xallinayo muranka ka dhashay biyaha webiga Nile
Wasiirada arrimaha dibadda dalalka kala ah Itoobiya, Masar iyo Suudaan ayaa waxay ku sugan yihiin dalka Mareykanka kuwaas oo ka qeybgalayo wadahadallada ku saabsan mashruuca dhismaha biyo xireenka webiga Nile ee muranka badan dhaliyay.
Dhismaha mashruuca weyn ee biyo xireenka ayaa hadda ka socda waqooyiga Itoobiya, haddii la dhameystiro waxaa uu noqonaya xarunta ugu weyn ee laga dhaliyo korontada ee ku taal Afrika.
Balse Masar waxay ka cabsi qabtaa in mashruuca uu fursad u siin Itoobiya inay maamusho biyaha.
Wadahadalladii ugu dambeeyay ee uu Mareykanka garwadeenka ka yahay ee uu ku dhexdhexaadinayo Masar iyo Itoobiya ayaa laisku mari waayay xilli hadda ka hor wadahadallo kale ay guul daro kusoo gabagaboobeen.
Masar oo boqolkiiba ku tiirsan biyaha webiga Nile ayaa waxay ka cabsi qabtaa in biyo xireenka uu saameyn ku yeelan doono heerka biyaha ee gaaro dalkaas.
Haddii la dhameeyo mashruucan uu ku kacayo 4 bilyan oo doolar, Itoobiya waxay noqoneysa dalka ugu wax soo saarka badan korontada guud ahaan qaaradda Afrika.
Dhisidda biyo xireenka waxaa marar badn hareeyay dib u dhac, ma kala cadda inuu howlgali doono sannadkan 2021-ka oo ah xilliga ay dowladda sheegtay inuu si rasmi ah uu shaqeyn doono.